Ahoana no atao raha te hahazo zazavavy tsara rehefa avy nihaona aminy? (Ny fitiavana sy ny fifandraisana, ny Fiarahana) - Ny LAHATSARY amin'ny CHAT-Fitiavana online!
Fotoana volana dia tsy ho tara loatra
Miarahaba, izaho sy ny ankizivavy iray tany am-pianarana, izay nijery ahy matetika, ary koa amin'ny fanoloana ny mpianatra manaraka ahyTe-hanontany landy raha te hihaona amiko irery ihany."Ahoana no ahafahako manao izany tsara kokoa? Afaka manontany aloha raha toa ka misy na inona na inona momba ny ny faran'ny herinandro. Raha toa ka tsy manana na inona na inona nikasa, dia aza misalasala manontany raha manana izay te-miara. Raha manana tombontsoa iombonana, dia Eny, raha tsy izany vao hihinana crème glacée, mandeha any amin'ny sarimihetsika (na manokana aho fa tsy tingled, heveriko fa, satria Eny, tena tsy resaka) na milalao lalao video? Izany dia tsy maintsy misy zavatra ifandraisany amin'ny tetikasa, dia ho avy hatrany tsarovy fa ny hany fanamarinana na tena adidy tena. Mirary anao ho tsara vintana.
Ka manontany izay nanome anao ny maro, dia nanoratra hafatra, antso ao amin'ny hariva, ary mangataka ny zavatra tokony hatao rehefa any an-tsekoly.
Toy izany koa fikarohana ho an'ny hafa
Izany dia miankina amin'ny izay tanàna te-hahazo ny mpivady ny Sait ho tsotra gilasy? Aho manasa anao. Tsy fantatro raha mifanatri-tava fivoriana dia hendry hevitra, raha toa ka mbola tsy mahafantatra izany tsara. nandritra ny fivoriana toy izany, manana volo, ny namana tsara indrindra izay tarihiny eny, ary koa ny namana tsara indrindra. ny rivotra dia mihoatra aina. ary ny tsara indrindra tsy miandany faritra. Mahatonga ny olona iray ho anao ao an-tanàna, ary ianao handeha tsy hoe te-hividy vaovao ianao pataloha. ary avy eo dia hamburger sy Cola-Cola. ary ny veloma, Odin, dia tena tsara ho anao amin'izao fotoana izao, moa ve isika te-handeha any ho any indray? Ahoana no be ianao avy eo dia ny olona hafa, toy ny mifanohitra amin'ny zavatra azontsika lazaina momba ny mahay Mampiaraka, ny rakotra taratasy, sns.) alohan'ny fotoana voalohany aho mihinana azy, ary hahita raha indray mandeha ihany eo amin'ny lafiny iray koa ho an? ?? amin'izao fotoana izao dia mijery ahy amin'ny fialan-tsasatra sy foana tamin'ny tanako. Ny namana ary matetika akaiky, ary raha ny indray dia lasa. te hangataka izay tokony nataoko.
Foana izy mijery ahy tena tsara.
Aho ao amin'ny kilasy ary mino aho fa izany no marina fa mangataka aho ny inona no maharatsy azy.
Hey, paroasy fiara, misy ankizivavy iray tany am-pianarana fa tena tia. Matetika isika miresaka ny hafa, izahay ihany koa ireo nanana fifandraisana ara-batana, ary koa ny tickling, fahazavana ady Totohondry, etc, Aho ho tena faly aho raha toa ka afaka hitsena anao ao amin'ny manokana, fa tsy ny amin'ny fomba atao amin'ny tsara indrindra. Indray mandeha isan-kerinandro, amin'ny zazavavy avy ny kilasy mipetraka manaraka ahy, ary avy eo dia izaho koa manana ny kabary. Indraindray dia mahatsapa toy ny izy teo ny R fisotroana. Tena toy izany, nefa tsy fantatro izay tokony hatao. Aho ho afaka handeha antso fivoriana indraindray. Hi, aho Annie, ary satria misy ny ankizivavy iray tany am-pianarana. Izy dia tena tsara ary tena tsara tarehy. Isika ihany koa dia mahafantatra izany tsara (tsy hiresaka be dia be, dia matetika no mandeha an-trano eo ihany fiara fitateram-bahoaka). Izy no nipetraka teo akaikiko eo amin'ny jeografia sy ny matematika, ka manampy ahy, dia matetika izahay no samy hafa. Amin'ny teny anglisy, dia hitandrina izany ombieny ombieny aho, efa marary, sy ny rihana ambonin'ny, ary ny mpangalatra mijery mivadika ahy manodidina (na dia tsy handoavana ny saina, ianao mitsiky be dia be), izay dia efa famantarana tsara, rehefa novakiako.
Tsy maintsy momba ny iray ihany tia vazivazy toy ny ataoko, izany hoe na dia nihomehy ireo.
Amin'ny Ankapobeny, dia mihomehy be dia be, ary izany dia manome ahy ny fitenenana mahazatra, sambatra, tsy ny fahatsapana. Raha ny marina, dia tsy na Tiako azy kely. Izy no efa naneho ahy be dia be. Izay aho dia tena mankasitraka, satria izy efa nilaza tamiko zavatra be dia be, fa ny zazavavy tsy afaka milaza tena. Izany no mahatonga ahy te mba hahafantatra ny fomba hifandray amin'ny daty ka tsy mba toa adala na mahamenatra. Raha ny ankizivavy, dia Immen Hira aho saro-kenatra kely, indrindra fa rehefa ny tovovavy manodidina. Misaotra anao mialoha noho ny valin. Noho izany, amin'ny herinandro Ho any, misy vaovao zazavavy ao amin'ny kilasy fa tena tia. Izy no nipetraka teo akaikiko ihany koa. Fa nahoana aho no nanapa-kevitra ny hanao ny fivoriana manomboka ny fifandraisana.
Fa ahoana no maka ny dingana voalohany? Aiza aho no tokony hihazona ny fivoriana? Inona no tokony hatao sy izay tokony hataoko raha izaho no nolavina? Lay satria misy olona manana torohevitra ho ahy? Isika samy momba ny mitovy taona, ary nitondra ahy ho raha mba miaraka, fa tsy haiko hoe inona koa no hafa noho ny resaka ary manao izany.
Nahazatra ahy ny miresaka ny tenako, sy ny ankizivavy iray tany am-pianarana nanontaniana izy raha toa ka te hiaraka amiko. Hoy izy hoe: tsia, na dia ankehitriny aza, satria tsy fantatro, ny zavatra atao any an-tsekoly ao amin'ny maraina, na dia ny kilasy izany dia tsy misy. Te-handany ny maraina amin'ny zazavavy avy any am-pianarana, satria izay no tsy zavatra azonao atao, nefa tsy matahotra inona no tsy mety. Manana boky ho an'ny tovovavy tao am-pianarana, ary izaho te-handeha amin'ny daty izany, ary jereo raha afaka mametraka fanontaniana tsara taorian'ny fivoriana, na taoriana ny fifandraisana, ary avy eo dia manontany. Hi, aho te hihaona ny ankizivavy, fa tsy izay. Isika ihany no mahafantatra ny tsirairay avy amin'ny ranomasina. Ao amin'ny trano fisakafoanana aho, tsy te-handeha aho ny tovovavy amin'ny fitiavana tao am-pianarana. Ho avy ianao ho ahy, tsy ny lohany.
Matetika aho no mijery ny fampianarana sy mieritreritra foana ny azy.
Isika dia manoratra, ary miresaka any an-tsekoly. Nefa tsy hahita azy fony izy koa dia liana amin'ny ahy, satria indraindray izy mijery ahy, ary indraindray izy no mahatonga ahy tezitra. Tokony mangataka rehefa"fanontaniana Fotoana"? Sasin: aho Annie sy ny zazavavy. Aho tsy tena tsara tarehy, tsy toy ny hafa ny zazavavy tao am-pianarana (fa izaho mahay Tovovavy). Aho tena saro-kenatra eto an-tany.
Izany hoe: Misy zazalahy tao am-pianarana.
Izany no tena malaza, ary saika ny rehetra ny tovovavy raiki-pitia aminy. Efa tena variana niaraka taminy nandritra ny herinandro vitsivitsy izao, satria tsy matetika ny mahazo ny teny tsara. Izy mijery ahy tany am-pianarana, indraindray rehefa izy no mihazona ahy ny eo an-tsaha, ny amin'ny namana, mitsangana izy manaraka ahy, ary tsy misy toerana avo kokoa mihoatra noho ny hafa. Noho izany dia mihazona ny tsirairay, ary izy hatrany no mahatonga ahy dia manaraby. Raha tsy izany, dia tsy manao izany.
Aho sahiran-tsaina kely satria izy dia tsy mahafantatra hoe inona no holazaina.
Tsy azoko antoka dia tsy tia azy. Tsy manana traikefa mbola ary nihevitra fa afaka manampy ahy manao ahoana, izaho dia olona, efa saika tsy mankasitraka ny fifandraisana amin'ny ankizivavy, ka manokana. Maro ny namako matetika no manoratra amin'ny ankizivavy na hihaona aminy tsindraindray. Tsy fantatro izay tokony hatao, na miandry fotsiny. Manantena aho fa ho tsara ny valiny. Hey, misy ankizivavy iray tany am-pianarana izay hitako tena mahaliana, raha izy mijery ahy avy lavitra. Rehefa mijery azy, hoy izy nitsiky tamiko. Rehefa manana ny mitovy saranga, izy foana nipetraka teo akaikiko ny hafa ankizilahy ao amin'ny mitovy saranga, ary izaho efa ho tanteraka ihany Izaho saro-kenatra aho, ka niresaka ny momba ahy, fa tsy amin'ny hafa ankizilahy izy foana. Moa ve aho tahaka azy, na dia izy miresaka amiko satria izaho tsy tia azy? Aho tena tia ny bandy tao am-pianarana, ary izy ho tonga eto tsy ho ela. Tsy sahy nanontany azy raha toa ka izy tia ahy. Isika dia manana ilay tombontsoa mitovy, raha tsy vazivazy, dia foana izy mijery ahy mba hijery raha toa aho mihomehy, dia foana ny mijery ahy rehefa manao aho puddles amin'ny hafa ry zalahy, fa izay ny namana dia manasa azy ho tsy miraharaha, matetika izy no manana ahy satria, fara fahakeliny, dia tahaka azy, fa satria izany no mahatonga dia manana lisitra (izay angamba aho na dia diso fandray ny mihatohatoka ary izy tia ahy fotsiny toy izany? manampy ahy. Te-hiverina aho ny fiaraha-monina ny fanontaniana momba izay handeha amin'ny zazavavy iray ho toy ny"daty voalohany". Izay manao ny tanora mandehana amin'izao fotoana izao raha izy ireo no manao ny fanendrena? Aiza no halehanao? An-bara. Inona no miresaka momba ny daty voalohany? Sy ny ahy ny fanontaniana farany dia rehefa"ny Zazavavy noho ny zazalahy"dia hoy indray izy:"afaka mandeha miaraka aminy mba miala voly."(tsy lazaina intsony fa izy no hamadika) Ahy, fa ny anankiray amin'ny adala toaka, marina? Tsy mbola nisy teo amin'ny daty amin'ny zazavavy. Nanoratra aho hoe ny tovovavy mandritra ny herinandro iray manontolo mba hitondra antsika ho amin'ny ambaratonga io ny fahazavan-tsaina.
Nanoratra momba ny hafatra.
Mila ve aho mba mahandrasa kely na manontany raha misy fanontaniana? Mandra-pahoviana no andinin-teny azy amin'ny zazavavy izy raha tsy mangataka ny daty? Raha toa aho Mampiaraka lahatsary Mampiaraka ny ankizivavy na. ary avy eo aho dia te-handeha amin'ny daty miaraka aminao, tokony aho fa manontany raha ianao handeha tsy avy amiko na ny manontany ny fanontaniana kokoa raha io daty amiko? Ny olana dia eo amin'ny Aterineto, sy ny namany ny heviny amin'ny maha-samy hafa tanteraka, dia midika fa ny teny hoe Mampiaraka ny tovovavy dia betsaka kokoa izay mametraka teritery amin'ny sy ny mahafinaritra, ny hafa kosa mihevitra fa izany no daty mba tsarovy, toy izany koa ny tovovavy ihany koa, satria ny zavatra rehetra tiako.
Inona ny hevitrao?"Io no daty voalohany, aiza aho no hihaona ny ankizivavy, fa nahoana, aiza, ary inona no azontsika atao, dia afaka hanome ahy ny soso-kevitra sasany Misaotra mialoha.
Mampiaraka SIMFEROPOL Sevastopol-FEODOSIA Yalta ny Vkontakte
Patemon karo wong manca nikah kanggo jerman saka Jerman
adult Dating tsy misy fisoratana anarana video trandrahana amin'ny chat roulette fisoratana anarana ny lahatsary amin'ny chat roulette video Mampiaraka maimaim-poana an-tserasera ny lahatsary amin'ny chat Mampiaraka tsy misy fisoratana anarana mba hitsena ny fisoratana anarana video Skype Dating free ny Fiarahana amin'ny aterineto maimaim-poana ny mampiaraka toerana